Marcos Rojo Ayaa Ku Boorinaya Edinson Cavani Inuu Ka Tago Man United Kuna Biiro Kooxda Boca Juniors
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Marcos Rojo ayaa ku boorinaya Edinson Cavani inuu ka tago Man United...
Daaficii Hore Manchester United Marcos Rojo ayaa ugu baaqay Edinson Cavani in uu ku biiro Boca Juniors xagaagan.
Mustaqbalka Cavani ayaa ah qodobka ugu weyn ee looga hadlo xilligan, 34 jirkaan ayaa qandaraaskiisa Old Trafford uu dhacayaa xagaaga, waxana la arki doonaa hadii United heshiiskiisa ku dari karto hal sano.
Cavani ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu ku laaban doono South America kooxda Boca Juniors, Rojo – oo ka tagay Man United kuna biiray kooxda reer Argentine horaantii sanadkan – ayaa shaaca ka qaaday inuu la xiriiray saaxiibkiis hore si uu ugu biiro kooxda.
Isaga oo la hadlaya wariyaasha, Rojo wuxuu yiri: “Dabcan intaas ka sokowna wuu doonayaa, taas oo ah mid muhiim ah. Markii aan u sheegay inaan haysto suurtogalnimada inaan u saxiixo Boca, wuxuu ii sheegay xaaladdiisa.
“Waan la hadlay isaga. Wax yar ayaan la ciyaaray. Waxaan wada joognay afar ama shan bilood. Waa xirfad yahan weyn hadii uu gaaro kubada cagta Argentine, wuxuu noqon lahaa xiddig weyn oo kubada cagta Argentine si fiican u qaban doona.”
Cavani ayaa leh lix gool iyo labo caawin 19 kulan oo Premier League ah oo uu saftay xilli ciyaareedkan, United ayaana la rumeysan yahay inay raadineyso xidiga kooxda Paris Saint-Germain Mauro Icardi haddii halyeeyga uu baxo dhamaadka ololahan.
Previous articleWaa kuma garsooraha dhexdhexaadin doono kulanka El Clasico Maalinta Sabtida.
Next articleTababarihii hore ee Xidiga Erling Braut Haaland oo sheegay Horyaalka uu jecelyahay